फ्लप भयो कपिलको ‘फिरंगी’
एजेन्सी, मुम्बई, 2017/12/04
कपिल शर्मालाई टिभीको दुनियाँमा कमेडी किंग भन्ने गरिन्छ तर ठूलो पर्दामा उनको जादू चल्न सकेन । गएको शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको उनको फिल्म ‘फिरंगी’ बक्स अफिसमा फ्लप भएको छ । यो फिल्मले दर्शकलाई यतिधेरै निराश बनायो कि सिनेमा घरमा अहिले दर्शकको संख्या निकै न्यून छ ।
‘फिरंगी’ले सुरुवातको तीन दिनमा मात्र ६ करोड ५० लाख कलेक्सन गरेको छ । रिपोर्ट्सका अनुसार, ‘फिरंगी’ले पहिलो र दोस्रो दिन २-२ करोड कमायो भने तेस्रो दिन साढे २ करोड कलेक्सन गर्‍यो । यसभन्दा अगाडि कपिलले २०१५ मा फिल्म 'किस किसको प्यार करूं'बाट बलिउडमा डेब्यू गरेका थिए र यो फिल्मलाई दर्शकले खुब रुचाएका थिए ।
यो फिल्मले बक्स अफिसमा ५० करोड (लाइफटाइम)को विजनेश गरेको थियो । तर, ‘फिरंगी’ले तीन दिनमा त्यति पनि कमाउन सकेन जति 'किस किसको प्यार करूं'ले एक दिनमा कमाएको थियो ।
‘फिरंगी’ कपिलको दोस्रो फिल्म हो, जसलाई राजीन ढिंगराले निर्देशन गरेका हुन् । यो फिल्ममा कपिलसँगै अभिनेत्री ईशिता दत्ता र मोनिका गिलको पनि मुख्य भूमिका छ । ‘फिरंगी’लाई कपिल आफैले निर्माण गरेका हुन् ।
चैत्र २३ मा करिश्मा र जयकिसनको ‘हिरोज’
‘नेप्टे’ गीत : रोहितकी ‘दिल रानी’ छुल्ठिम
सलिनको हातबाट जलजलालाई सहयोग
अनु र सविनको प्याचअप ?
कान्छीको मुस्कान (फोटोफिचर)
‘बागी २’ ट्रेलरमा टाइगरको धमाकेदार एक्सन
घुम्नमै व्यस्त हमाल, फिल्ममा कमब्याक कहिले ?
चैत २ मा लाग्ने भो ‘डेस्टिनेशन काठमाडौं’
‘ऐतराज’ को सिक्वेलमा प्रियंका ?
‘पञ्चेबाजा’ को मोफसल दौडाहा